ဖန်သားပြင် F-7578 ပါသော ခေတ်မီ MDF ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံး နှစ်လုံးတွဲ ဒီဇိုင်း
ဧည့်ခန်း ခေတ်မီ ဥရောပစတိုင် ရေချိုးခန်း ဗီရိုများ အီတလီ ပရိဘောဂ နှစ်ထပ် ဇိမ်ခံ ရေချိုးခန်း ပန်းကန်လုံး
Illuminated Mirror ရေချိုးခန်းဗီရိုဟိုတယ် Bath Vanity
မော်ဒယ် : PR-850 ကုန်ပစ္စည်းအပိုင်း: Vanity + Countertop + ကြေးမုံအရွယ်အစား: အနတ္တ: 800*580*850、ကြည့်မှန်: 700*40*830 အရောင်: အဖြူသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်း: အစိုင်အခဲရော်ဘာသစ်သား, အထပ်သား, သဘာဝစကျင်ကျောက်, DTC ဟာ့ဒ်ဝဲ. 1. 2နူးညံ့သောတံခါးများ 2. 1ပျော့ပျောင်းသောအံဆွဲ 3. ချိန်ညှိအမြင့် leveler 4. သဘာဝစကျင်ကျောက်. 5. Eco-friendly ဆေးသုတ် 6. handcrafted အနတ္တ 7. သစ်သားဘောင်မှန် ...
Model PR-949 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 2020 * 580 * 850mm ကြေးမုံအရွယ် 1700x60x900 mm ရော်ဘာပစ္စည်းသစ်သားကောင်တာသဘာ ၀ စကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 12 တစ်ချိန်ကကြွေထည်မြေထည်ကိုပုံသွင်းသည်။. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံပစ္စည်းရော်ဘာသစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C25 အဖြူရောင်အဖွင့်ဆေးသုတ် Hardware Hardware DTC soft close closeing ပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက်အောက်မှာ 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်…
Model PR-861 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 737x580x850mm ကြေးမုံ 680x125x880mm ပစ္စည်းရော်ဘာသပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 cer တစ်ချိန်ကကြွေအင်တုံပုံသွင်းခြင်း. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံရော်ဘာသစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C25 အဝါရောင်အဖွင့်ဆေးသုတ် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး…
မော်ဒယ် PR-7751 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 800x580x520mm ကြေးမုံအရွယ်အစား ၇၀၀x၄၀x၉၀၀ မီလီမီတာပစ္စည်းအထပ်သားကောင်တာခုံးဇင့်အင်တုံ ၁၂၈၀ ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံပစ္စည်းရော်ဘာသစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C215 ဟာ့ဒ်ဝဲ DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက်အောက်မှာ 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. ရေစိုခံအဖုံးများစွာဖြင့်…
Model PR-760 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 1000x600x860mm ကြေးမုံ 800x30x1050mm ပစ္စည်းရော်ဘာသပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 cer တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်း. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံရော်ဘာသစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C27 အဖြူရောင်ဆေးသုတ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာ DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက်အောက်မှာ 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာ ...
Model F-7118 အရွယ်အစား 800 * 580 * 830mm ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 730x980 mm ကြေးမုံရော်ဘာပိတ်ပင်သစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်ပစ္စည်းရော်ဘာသပိတ်ပင်သစ်သားတန်ပြန်သဘာဝစကျင်ကျောက်အင်တုံ ၁၂၈၀ ℃တစ်ချိန်ကကြွေထည်ကိုပုံသွင်းသည်. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာအရောင် C24 အဖြူရောင်ဆေးသုတ် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက်အောက်မှာ 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း,…
မော်ဒယ် PR-851 ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား 1000x580x850mm ကြေးမုံအရွယ်အစား 900x40x830mm ပစ္စည်းရော်ဘာသပိတ်ပင် Countertop သဘာဝစကျင်ကျောက်ဝှမ်း 1280 cer တစ်ချိန်ကကြွေအင်တုံပုံသွင်းခြင်း. Glaze အထူ>1.1မီလီမီတာကြေးမုံရော်ဘာသစ်သားဘောင် ,5မီလီမီတာကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်အရောင် C25 အဝါရောင်အဖွင့်ဆေးသုတ် Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & တပ်ဆင်ထားအံဆွဲဆလိုက်အောက်မှာ 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး…
မော်ဒယ် F-77251200 အရွယ်အစားကက်ဘိနက်:1200*580*350မီလီမီတာ、ကြည့်မှန်:1200*40*700မီလီမီတာပစ္စည်းရော့ခ်ပန်းကန်&Ash သစ်သား Countertop ရော့ခ်ပန်းကန်အင်တုံ 1280 ℃တစ်ကြိမ်ကြွေထည်အင်တုံပုံသွန်း. Glaze အထူ>1.1mm Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန် Color C246 Hardware DTC ပျော့ပျောင်းသောပတ္တာ & အနိမ့်ဆုံးအံဆွဲဆလိုက် 1. VALSPAR ဆေးသုတ်ခြင်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. အကွိမျမြားစှာရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့,…
123နောက်>...8 စာမျက်နှာ 1 ၏ 8
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ်အား လွတ်လွတ်လပ်လပ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။4အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းမှတဆင့်နာရီ.
E-mail ကို: admin@frankvanity.com